९ महीनामा शिखर इन्स्योरेन्सको नाफा ३६ करोड ७० लाखभन्दा बढी | आर्थिक अभियान
९ महीनामा शिखर इन्स्योरेन्सको नाफा ३६ करोड ७० लाखभन्दा बढी
वैशाख ३०, काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण शुक्रवार सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले चालू आवको ९ महीनामा अर्थात् तेस्रो त्रेमाससम्ममा रू. ३६ करोड ७० लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा समान्य अर्थात् १ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । कम्पनीले गत आवमा रू. ३६ करोड ३३ लाख नाफा कमाएको थियो ।
त्यसैगरी कम्पनीको बीमाशुल्क गत आवको तुलनामा चालू आवमा २२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत आवमा कुल रू. २ अर्ब ९६ करोड बीमाशुल्क आर्जन गरेकोमा चालू आवमा बढेर रू. ३ अर्ब ६२ करोड पुगेको हो ।
कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ७५ करोड रहेको छ भने चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले जगेडामा रू. ७५ करोड ५५ लाख सञ्चितत गरेको हो । सो अवधिमा कम्पनीको बीमा कोषमा रू. १ अर्ब ४७ करोड जम्मा भएको छ ।
बीमा कोष गत आवको तुलनामा चालू आवमा १९ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । गत आवमा कम्पनीको बीमा कोषमा रू. १ अर्ब २३ करोड जम्मा भएको थियो । चालू आवमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २८ दशमलव २२, मूल्य आम्दानी अनुपात ४१ दशमलव ४६ गुणा र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २५५ दशमलव ९६ रहेको छ ।